Kahor kulanka Bayern Munich imisa gool ayuu Lionel Messi ka dhaliyay wareega sddeeda ee tartanka Champions League? – Gool FM
RASMI: Frank Lampard oo xaqiijiyey in heshiiska Edouard Mendy uu dhammaaday, laacibkuna uu hadda tijaabada caafimaad u marayo Blues
DHEGEYSO: Barnaamijka Gundhigga Gool FM
DEG DEG: Kooxda Atletico Madrid oo xaqiijisay in Korona Fayras uu ku dhacay mid ka mid ah xiddigihii uu sida weyn u doonayey Pep Guardiola
Kooxda Manchester United oo bilowday wadahadal ku aaddan saxiixa mid ka mid ah xiddigaha Barcelona
RASMI: Kooxda Inter Milan oo dhammaystiray saxiixa Arturo Vidal… + SAWIRRO
Alvaro Morata oo ka gudbay tijaabada caafimaad uu u maray kooxda Juventus… +SAWIRRO
Liverpool oo qorsheeneysa in Real Madrid ay kula dagaalanto saxiixa Kylian Mbappé
Muxuu ka yiri Pep Guardiola guushii ay xalay kooxdiisa Man City ka gaartay Wolverhampton??
Halyeey reer Argentina ah oo ka warbixiyay sababta keentay dhibaatada Messi ee kooxda Barcelona
Dajiye August 10, 2020
(Yurub) 10 Agoosto 2020. Kaddib markii uu ku hogaamiyay in Barcelona ay garaacdo kooxda Napoli kulankii lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League, isla markaana uu dhaliyay gool cajiib ah, Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya kulanka adag ay kula ciyaari doonaan Bayern Munich Jimcaha soo aadan wareega siddeeda ee tartankan.
Barcelona waxay kaliya u baahan tahay in Lionel Messi uu bandhig fiican ka sameeyo kulanka soo aadan, si ay kaga gudbaan caqabada Bayern Munich oo ah kooxda loo saadaalinayo inay ku guuleysan doonto tartanka Champions League.
Haddaba Lionel Messi ayaa rikoorro gooldhalineed ee cajiib ah looga diiwaan galiyay wareega siddeeda dhamaadka ee tartanka Champions League, taasoo ka dhigeysa in Barcelona ay rajo fiican ka yeelato kulanka Jimcaha.
Xiddiga reer Argentina ayaa ciyaaray 22 kulan oo wareega siddeeda ee tartanka Champions League tan iyo bilowgii xirfadiisa ciyaareed, wuxuu dhaliyay 12 gool, wuxuuna caawiyay 4 gool kale, sidaas darteed wuxuu ka qeyb qaatay 16 gool, taasoo ah heer gooldhalineed cajiib ah, wuxuuna kaga sarreeyaa dhamaan ciyaartoyda adduunka marka laga reebo Cristiano Ronaldo.
Goolkii ugu horreeyay uu Lionel Messi ka dhaliyay wareega siddeeda dhamaadka ee tartanka Champions League wuxuu ka dhaliyay kooxda Bayern Munich, gaar ahaan xilli ciyaareedkii 2008-2009, markaasoo uu dhaliyay labo gool, wuxuuna caawiyay gool kale, kulankii lugta hore ee ku dhamaaday 4-0 ay ku adkaatay Barca.
Xilli ciyaareedkii ku xigay Messi ayaa wareega siddeeda 4 gool kaga dhaliyay kooxda Arsenal, wuxuuna Barcelona ku hoggaamiyey inay guul ku gaarto 4-1, taasoo aheyd ciyaar ay dad badani u arkeen inay ka mid tahay kuwii ugu fiicnaa ee xirfada Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa awooday inuu gaaro shabaqa ugu yaraan hal jeer wareega siddeeda dhamaadka muddo afar xilli ciyaareed ah, balse laga bilaabo xilli ciyaareedkii 2013-2014, Messi ayaa ku dhibtooday inuu wax gool ah ku dhaliyo wareegan, wuxuuna awoodi wayey inuu shabaqa ku gaaro wareegan muddo 5 sano ah, waana in ka badan 10 kulan.
Lionel Messi ayaa soo laabtay si uu u soo afjaro abaarta ka heysatay inuu gool ku dhaliyo wareegan, wuxuuna ku soo gabagabeeyay kulankii lugta labaad wareega siddeed dhamaadka ay kooxda Manchester United ku wada ciyaareen sanadkii 2019, wuxuuna Messi kulankaas dhaliyay 2 gool, isagoo ku hoggaamiyay kooxdiisa inay u soo baxdo afar dhamaadka Champions League.